Cuncunka maqaarka: maxay u muuqdaan iyo sida loola dhaqmo | Ragga Stylish
Dad badan waa wax caadi ah in la helo maqaarka cuncunka Waxaan u maleyneynaa inay tahay calaamado jirro laakiin maahan. Waa tan ugu badan ee maqaarka waxayna ku dhacdaa saddex meelood meel dadka adduunka. Waxaa jira noocyo badan oo maqaarka cuncunka ah, ha ahaadeen kuwa deegaanka ku baahsan, kuwo guud, marmar ama kuwo daba dheeraada. Laakiin maxaa cuncun ugu muuqda maqaarka?
Qodobkaan waxaan ku faahfaahin doonnaa sababaha ugu muhiimsan iyo waxa aad sameyn karto si loo yareeyo astaamaha. Ma rabtaa inaad wax ka barato? Sii wad akhriska waadna ogaan doontaa 🙂
1 Sababaha cuncunka u muuqdo
2 Wareegyada waqtiyada gaarka ah
3 Cuncun markaad taabato waxyaabo badan
4 Maqaarka cuncunka oo leh dhibco cas yar
5 Cuncun faraha dhexdooda
6 Cuncun markay kulul tahay
Sababaha cuncunka u muuqdo
Waxaa jira sababo badan oo cuncun u muuqan karo. Waxaa laga yaabaa inaad nooc ka mid ah xasaasiyadda ku leedahay cuntada ama dharka. Dad badan ayaa xasaasiyad ku leh daawooyinka qaarkood mana oga. Had iyo jeer falcelin kama horjoogsato marinnada neefta oo aad ayey u daran tahay, laakiin waxay ku soo muuqan kartaa maqaarka cuncunka.
Sababahan ayaa kicin kara dermatitis atopic, cudurka psoriasis, ama finan. Cawaaqibka maqaarka cuncunka leh waa inuu jiro isbeddel ku dhaca maqaarka maaddaama caqabadda maqaarku dhaawacan tahay. Sidaa darteed, habka difaaca jirka wuxuu isku dayaa inuu difaaco asagoo sii deynaya histamine. Waxaan xasuusnaano in histamine uu yahay diiriye awood badan oo xididdada dhiigga leh, sidaas darteed, wuxuu keenaa guduudasho iyo cuncun.
Maqaarku wuxuu u falceliyaa qaab buun buunin ah oo kiciya taas oo, guud ahaan, saameyn ku yeelan doonin maqaarka caadiga ah laakiin waxay ku dhacdaa kuwa xasaasiga ah. Dareen-celintani waxay ka imaan kartaa cuncun khafiif ah oo xanuun daran ah. Waxay awood u leedahay inay gaarto heer taas oo lagu qasbay inay xoqdo xoog, mararka qaarkood xitaa waxay keentaa dhaawacyo qaarkood.
Marka xigta, waxaan falanqeyn doonnaa noocyada maqaarka cuncunka leh iyo waxa la sameeyo si looga takhaluso ama loo yareeyo.
Wareegyada waqtiyada gaarka ah
Waxaa jira dad maqaarka cuncun leh oo kaliya ku dhaca xilliyada qaarkood ee sanadka, tusaale ahaan, guga. Waxay u badan tahay noocyadan xaaladaha ah waa inuu yahay cudurka maqaarka ee atopic. Waxay ku dhacdaa gaar ahaan maqaarka qalalan ama haddii aad ku xanuunsatid neef ama rhinitis. Waa wax iska caadi ah inay soo muuqdaan xilliyada ugu qabow jiilaalka ama guga xasaasiyadda manka awgeed.
Marka uu maqaarka ku yaal maqaarka maqaarka, casaan cuncun leh ayaa badanaa soo baxda. Tani waxay u keentaa raaxo la'aan kuwa ku dhaca, maadaama haddii aad shaqeyneyso ama aad wajaheyso shacabka ay tahay wax aan raaxo lahayn.
Si loo yareeyo cuncunkan waxaa muhiim ah in si joogta ah loo qoyo maqaarka. Haddii aan sii hayno biyo ayaa waxaan cuncunka ka dhigi doonnaa waqti yar. Farmashiyaha waxaan ka heli karnaa noocyo kala duwan oo ah hypoallergenic jirka iyo kareemada wajiga. Xaaladaha khaaska ah, marka ay dillaacaan cuncun aad u daran maqaarka, kareemka corticosteroid waa in loo isticmaalaa in lagu yareeyo cuncunka.
Cuncun markaad taabato waxyaabo badan
Waxaa macquul ah inaan kujirno xarun dukaameysi oo aan taabaneyno dharka, cuntada cuntada iyo alaabada kale ee keydka yaala. Mararka qaarkood maqaarkaagu wuxuu bilaabmaa cuncun waxaana jira barar, casaan, iyo mararka qaarkood xitaa finan.
Waa sidaas waxaa jira ku dhowaad 3.000 oo walxaha kiimikada ah dhammaan noocyada kala duwan ee u dhexeeya saabuunta, saabuunta dharka lagu dhaqo, waxyaabaha la isku qurxiyo, iwm. Taasi waxay soo saartaa cuncun taabashada maqaarka. Dadka ugu badan ee ay dhibaatadu saameysey waa kuwa ku dhaca cudurada loo yaqaan 'contact dermatitis'. Waxa kale oo sababi kara haddii nooc kasta oo xasaasiyad ah ay ku jirto biraha ama cuntooyinka qaarkood. Dad badan ayaa xasaasiyad ku leh dahabka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo haddii aysan xeeb iyo dahab ahayn.
Dhamaan dadka ku xanuunsanaya cuncunkan, waxa aasaasiga ah waa inay joojiyaan taabashada waxyaabaha keena cuncunka. Haddii aadan joojin karin taabashadooda sababtoo ah waad la shaqeyneysaa, xiro galoofis si aad uga fogaato xiriir toos ah. Marka cuncunku muuqdo, way ku baabi'i kartaa si fudud adiga oo maydha maqaarkaaga oo aanad dib u taaban. Laakiin haddii sidoo kale barar iyo casaan jiro, waxay u badan tahay inaad isticmaasho boomaatada corticosteroid ama daawooyinka xasaasiyadda afka.
Hadday taasi si joogto ah u dhacdo, waxa ugu habboon in loo tago xasaasiyadda xasaasiyadda iyo in lagu sameeyo baaritaanada xasaasiyadda.
Maqaarka cuncunka oo leh dhibco cas yar
Hadday aagga ay na qaniineyso la gaduuday oo dhibco yaryar oo casaan ah ay bilaabaan inay u muuqdaan kuwo la mid ah qaniinyada cayayaanka, waxaad ku xanuunsanaysaa finan Tani badanaa waa astaamo xasaasiyadeed waana wax caadi ah in muuqaalka dhibcahan cas ay xiriir la yeeshaan qaadashada daawo kasta ama cunto kasta.
Si loo daaweeyo, haddii ay sababtay xasaasiyadda cuntada ama daawada, jooji qaadashadooda oo raadi waxyaabo kale oo aan xasaasiyad u lahayn. Haddii ay tahay wax badan oo dillaaca, qaado qubayska boorashka si aad maqaarkaaga u dajiso.
Cuncun faraha dhexdooda
Mararka qaarkood cuncunku wuxuu ku dhacaa oo keliya inta u dhexeysa faraha oo aan u dhicin si guud. Halkan waxa keena tani waa fungus u janjeera inuu dego meelaha dhididka iyo kuleylka badani ku ururaan. Tani waa wax caadi ah suulasha, maxaa yeelay waxaan siineynaa xaalado ku habboon oo ay ku noolaadaan.
Haddii aad ku xanuunsato fungus cagaha, waa inaad qaaddaa taxaddarro xad dhaaf ah. Waxaa la doorbidaa inaad bedesho sharaabaadahaaga laba jeer maalintii si had iyo jeer ay u ahaadaan kuwo qalalan. Xirashada flop-ka waa ficil fiican oo si fiican u qalaji, adoo ku adkeysanaya qaybta suulka. Laguma talinayo tuwaal wadaag Sidan ayaan uga fogaaneynaa in aan qaadsiino qof kale. Habka ugu wanaagsan ee lagula dagaallami karo waa iyadoo la adeegsanayo buufin antifungal ama budo ah lagu iibiyo farmashiyaha.
Cuncun markay kulul tahay
Waa iska caadi in gacmuhu ay cuncun badan ku yeeshaan cimilada kulul. Si kastaba ha noqotee, haddii ay tahay wax aad u sii socda waa cudurka urtikaria ee cholinergic. Waa wax iska caadi ah marka kuleylka jidhku kordho dhididkuna bilaabmo inuu soo baxo. Tani waxay dhacdaa inbadan markii la sameynayo isboorti ama la cunayo suxuun aad u basbaas badan Hilib cuncun badan ayaa badanaa soo muuqda waxaana ka horreeya dareen kuleyl ama gubasho. Iyo, inkasta oo muuqaalkeedu aad ugu badan yahay gacmaha iyo xabadka, waxay ka muuqan karaan meel kasta oo jidhka ka mid ah.
Si loo daweeyo, waxaa fiican inaad iska ilaaliso xaaladaha aad dhidid badan, maxaa yeelay markaan joojino dhididku dhibaatadu way baaba'aysaa. Sidaa darteed, haddii aynaan hore ka dhididin, waxba inooma dhici doonaan. Si taas looga fogaado waxaan isticmaali karnaa dharka cudbiga ah ee si fiican u dhididaa.
Waxaan rajeynayaa in talooyinkaan aad kula dagaalami karto maqaarka cuncunka leh ee dhibsada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Maqaarka cuncunka
Nadiifinta wajiga lagu sameeyo ee guriga lagu sameeyo